10ka Xarumood ee ugu waaweyn Mareykanka | Safarka Absolut
Luis Martinez | | La cusboonaysiiyay 22/09/2020 10:10 | USA
Tobanka xarumood ee ugu wanaagsan Mareykanka waa natiijada ka soo baxday firaaqada iyo dhaqanka xiisaha leh xukuma Waqooyiga Ameerika waana mid ku sii fidaya adduunka oo dhan. Caddaynta wanaagsan ee tan waa xaddiga dukaamadaas aan horey ugu haysannay Isbaanish.
Mareykanku wuxuu u weyn yahay sida qaarad iyo dhaqamo kala duwan oo ku wada nool halkaas. Laakiin qayb wanaagsan oo ka mid ah dadka deggan ayaa wadaaga habka loo baashaalo. Waxay yihiin taageerayaasha meelaha firaaqada waaweyn halkaas oo ay ka heli karaan wax walba, laga bilaabo dukaamada waaweyn ilaa dukaameysiga ilaa shineemooyinka halkaas oo ay filim ugu raaxeysan karaan iyagoo u maraya dukaamada moodada iyo agabyada ama makhaayadaha iyo maqaayadaha ay wax ku cuni karaan. Si fiican ayaa looga fiirsaday, ma ahan fikrad xun inaan wax walba gacanta ku heysano. Laakiin, annaga oo aan ku sii dheerayn, waxaan ku tusi doonnaa goobahan ganacsiga ee waaweyn.
1 Dalxiis ka mid ah Tobanka Xarumood ee ugu waaweyn Mareykanka
1.3 Boqorka Prussia Mall
1.4 Dukaanka Columbus Circle
1.5 Via Bellagio, oo ku xeel dheer tobanka xarumood ee wax iibsiga ugu wanaagsan Mareykanka
1.8 Grove, asal ahaan wuxuu ka mid yahay tobanka xarumood ee ugu wanaagsan Mareykanka
1.9 Mall ku yaala Buuraha Gaagaaban
1.10 South Coast Plaza, waxay ku taalaa mid ka mid ah tobanka xarumood ee ugu wanaagsan Mareykanka
Dalxiis ka mid ah Tobanka Xarumood ee ugu waaweyn Mareykanka
Laga soo bilaabo New York ilaa Los Angeles iyo ka Anchorage up Houston, dalka Waqooyiga Ameerika wuxuu leeyahay tiro badan oo ah goobo ganacsi. Laakiin qaarkood waxay u taagan yihiin baaxaddooda iyo dhammaystirka dalabkooda. Aan baranno iyaga.
Bloomington waa magaalo yar oo ka tirsan gobolka Hennepin (Minnesota). Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay mid ka mid ah tobanka xarumood ee wax iibsiga ugu wanaagsan Mareykanka. Waxay ku siineysaa 520 dukaan oo noocyo kala duwan leh, qiyaastii konton makhaayadood iyo, carruurta beerta madadaalada ugu weyn laga bilaabo dalka oo dhan.
Meeshan weyn waxay ku fidsan tahay 17 waddo waxayna abaabushaa qiyaastii afar boqol oo dhacdooyin bilaash ah sanadkiiba. Sida haddii waxaas oo dhammi aysan ku filnayn, waxay leedahay 14 shineemo, aquarium iyo xitaa koorso golf-yar.
Xaruntan weyn waxay ku taalaa magaalada sunrise, Degmada Broward, oo qiyaastii afartan daqiiqo baabuur ka wadata magaalada hoose Miami. Waxay isku darsamaysaa dhismooyin ganacsi gudaha, waxa loogu yeero Suuqa Sawgrass, iyadoo kuwa kale banaanka laga joogo aagga loo yaqaan Oasis. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay rakibaad saddexaad, oo loo yaqaan Colonnades-ka Sawgrass Mills, halkaas oo noocyada ugu qaalisan adduunka ay ku soo bandhigaan wax soo saarkooda qiimo aad u jaban.
Boqorka Prussia Mall
Waxaad ka heli kartaa duleedka magaalada Philadelphia, ee Pennsylvania. Ku dhowaad XNUMX oo mitir murabac ah, waa, sida ay leeyihiin milkiilayaasheeda, waa xarunta ugu weyn ee laga adeegto oo ku taal dhammaan xeebta bari ee Mareykanka.
Waxay leedahay 450 dukaanno, baarar iyo maqaayado, qaar ka mid ah kuwa ugu horreeya noocyada caanka ah sida Apple, Burberry, Louis Vuitton ama Sephora, waxayna heshaa agagaarka labaatan milyan oo booqdayaal ah sanadka.
Dukaanka Columbus Circle
Waxay ku taal dariiqa isla magacaas, kuna yaal bartamaha Manhattan, New York, iyo gudahood ah Xarunta Warner Time, koox dabaqyo dhaadheer ah oo leh hudheelo, baarar iyo maqaaxiyo badan. Xaruntan dukaameysiga waxaad ka heli doontaa dukaamo caan ah oo noocyada ugu qaalisan sida Swarovski, Armani ama Thomas Pink.
Makhaayadihiisa gaarka ah waxaad ku leedahay dhowr cunto kariye Per se, oo leh saddex xiddig oo Michelin ah, iyo kan Masa, Cunnooyinka Jabbaan oo loo tixgeliyo kuwa ugu qaalisan dhammaan magaalada New York. Sidoo kale, haddii aad rabto inaad socod gasho si aad cuntadaada u soo dejiso, kaliya labaatan mitir ayaa kuu jirta kan caanka ah dhexe Park.
Via Bellagio, oo ku xeel dheer tobanka xarumood ee wax iibsiga ugu wanaagsan Mareykanka
Waa qayb ka mid ah dhismaha Hotel Bellagio, ee Las Vegas. Qaab dhismeedka xarrago leh iyo qurxinta quruxda badan ayaa fikrad kaa siin doona waxa aad ka heli karto xarumaheeda: the dukaamada ugu qaalisan adduunka iyo muujinta ugu dambaysa ee raaxada. Noocyada sida Yves Saint Laurent, Chanel, Hermes, Gucci ama Prada waxay dukaamo ku leeyihiin Via Bellagio.
Marka laga hadlayo baararka iyo makhaayadaha, dhanka kale, waxay ku leedahay dhammaan dhadhanka iyo jeebadaha. Dhab ahaan, waxaad cuni kartaa qiyaastii shan iyo labaatan doolar. Meelaha martigelinta ee xaruntan dukaamaysiga, waxaan ka xusi doonnaa makhaayadaha Gelato iyo Bellagio, Michael Mina ama Shintaro.
Waxay u badan tahay inay tahay xarunta ugu caansan dukaameysiga Houston iyo xitaa gobolka Texas oo dhan. Waxay ku taalaa inta udhaxeysa labada xaafadood ee ugu gaar ah magaalada, Memorial iyo River Oaks, maahan meesha ugu fiican ee laga helo alaab jaban.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, waa wax cajiib ah, oo leh boqolaal dukaanno, maqaaxiyo badan, laba hudheel, barkado lagu dabaasho iyo xitaa bangiyada. Waxay kaloo leedahay baarkin ku dhow, gaar ahaan kan Gerald D. Hines Waterworld, halkaas oo aad ka arki karto muuqaalka biyaha ee ugu caansan Houston.
Waxay ku taal magaalada yar ee McLean ka tirsan gobolka Virginia waxayna leedahay afar dabaq oo dukaamo, baarar iyo maqaayado. Calaamadaha ku yaal meel xaruntan waxaa ka mid ah Adidas, Apple, Disney, Gucci, Diesel, Lego ama L'Occitane en Provence.
Dhanka maqaayadaha, bakhaarada cuntada degdega ah sida MacDonald ama Shake Shack waa badan yihiin, oo ay weheliyaan cunnooyinka kale ee Mexico ama Aasiya sida Panda Express.
Grove, asal ahaan wuxuu ka mid yahay tobanka xarumood ee ugu wanaagsan Mareykanka
Xaruntan weyn ee ku taal Los Angeles, Kaliforniya, waxay leedahay asal asal ah marka loo eego kuwa kale. Waana la helay bannaanka, sidii ay un un ahayd xaafad kale oo magaalada ka mid ah. Gaar ahaan, waxaad ka heli doontaa Wadada Wadista, halkaasoo sidoo kale ay ku yar yihiin caanku Suuqa Beeraleyda, oo aad diirada loogu saaray cuntada.
Markaad dhex socoto waddooyinka ka kooban Grove-ka, waxaad u malayn doontaa inaad dib ugu soo laabatay bilowgii qarnigii XNUMX-aad sababo la xiriira qaabka guryaha iyo qurxinta dukaamada. Kuwaas waxaa ka mid ah, Anthropologie, Australia UGG, Madewell iyo Johnny Was, oo ku xiga oo ay ku yaallo maqaaxiyo badan iyo sideed iyo toban tiyaatar.
Mall ku yaala Buuraha Gaagaaban
Waxay ku taal magaalada yar ee isla magaca ah ee ku taal gobolka Essex, oo ka tirsan gobolka New Jersey. Waxay leedahay dukaamo caan ah oo caan ah sida Cartier, Louis Vuitton Dior ama Dolce & Gabbana. Iyo afar iyo toban makhaayado oo ku siiya cunto dhakhso leh laakiin sidoo kale suxuun si faahfaahsan loo diyaariyay iyo xitaa cuntada vegan. Magacyada kuwan waxaa ka mid ah, Primo Mercato, Nordstrom Marketplace Café ama Afartan Karootada.
Plaza Koonfurta Xeebta
South Coast Plaza, waxay ku taalaa mid ka mid ah tobanka xarumood ee ugu wanaagsan Mareykanka
Si aan u dhammaystirno socdaalkeenna tobanka xarumood ee wax iibsiga ugu wanaagsan Mareykanka, waxaan kuu sheegi doonnaa midkan ku yaal Costa Mesa, Degmada Orange, California. South Coast Plaza waxay dhigeysaa meesha aad iska dhigeyso ugu yaraan 230 dukaanno iyo 30 maqaaxiyo, marka lagu daro xarunta farshaxanka Segerstrom, coliseum culus oo bixiya riwaayado iyo bandhigyo kale.
Kuwii hore, noocyada sida Alexander McQueen, Hugo Boss, Balenciaga, Carolina Herrera, Ermenegildo Zegna iyo Christian Louboutin ayaa ku leh xarumo xaruntan dukaameysiga.
Gabagabadii, waxaan ku tusnay tobanka xarumood ee wax iibsiga ugu wanaagsan Mareykanka, oo ah wadan ay aad ugu badan yihiin magaalo kasta oo yar ayaa u gaar ah. Waana taas cunid waa isku mid habka nolosha Mareykanka ama habka nolosha Mareykanka.
Gaadiidka DukaankaWaqtiyada firaaqada
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » 10-ka xarumood ee wax laga iibsado ee Mareykanka